FANAMPIANA NY MPIARA-MONINA : Tsy be kabary fa miasa hatrany ny Depiote Jocelyne Maxime
Vao tafaverina avy tany amin’ny Faritra Sava ny tenany dia niroso avy hatrany tamin’ny fanaovana asa soa izay mahazatra azy ny depiote Jocelyne Maxime, izay sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena. 17 novembre 2021
Noho ny fangatahan’ireo ray aman-dreny tao an-tampon-tanànan’Antsiranana dia notanterahina omaly tao amin’ny « hôpital militaire » ary hifarana anio ny fandidiana maimaim-poana ireo ankizy voan’ny « hernie » andiany faharoa. Tsiahivina fa herinandro vitsivitsy lasa izay no nanatanterahana ny andiany voalohany ary maherin’ny 20 ireo akizy nisitraka fandidiana maimaim-poana izany.
Ny alatsinainy teo kosa dia natolotry ny depiote Jocelyne Maxime tamin’ny fomba ofisialy ho an’ ny fikambanan’ny mpivarotra ao amin’ny Tsena mitafo ny toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana izay nasiam-panavaozana amin’ny fomba manara-penitra. Nisaotra sy nankasitraka ny depiote Jocelyne Maxime araka izany ireo mpivarotra tao an-toerana izay miisa 400 eo ho eo sy ny mponina manodidina. Marihina fa mandritra ny roa taona no nampijaly ireo mpivarotra amin’ny fampiasana ny toeram-pivoahana noho ny fahateran’ny fotodrafitrasa.
Nihena tao anaty loto sy fofona maimbo ireo mpivarotra sy ny manodidina. Velom-pisaorana ihany koa ny lefitry ny Ben’ny tanàna Samuelson amin’ny ezaka sy finiavana fanampiana ny mpiara-belona ataon’ny depiote Jocelyne Maxime. Nambarany ihany koa fa tsy tokony havela irery ireo mpivarotra ao amin’ny Tsena mitafo fa ilaina ny fanampiana azy ireo. Nandritra ny kabary nataony nilaza ny depiote Jocelyne Maxime fa hasiam-panavaozana ny Tsena mitafo manontolo. Naneho ny hafaliany ireo mpivarotra ary nirary fahombiazana hatrany ho an’ny depiote Jocelyne Maxime amin’ny asa sy andraikitra sahaniny.
Tsiahivina fa maro ireo asa sosialy sy fananganana fotodrafitrasa nataon’ny depiote Jocelyne Maxime any amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny izay mampiavaka azy amin’ny hafa raha tsy hilaza afa-tsy ny fanavaozana ny « Maison du quartier » ao amin’ny fokontany Grand-Pavois, ny fanitarana ny birao fokontany sy fanamboarana ny toerana fidiovana ao amin’ny fokontany Scama, ny fanamboarana birao fokontany vaovao ho an’ny fokontany Mangarivotra sy Manongalaza, ny fanamboarana trano fonenan’ireo ray aman-dreny sahirana maromaro, sns. Ny azo ambara dia maromaroa ny toa depiote Jocelyne Maxime.